WordPress ဆိုဒ်အသစ်တစ်ခုကိုအကောင်အထည်ဖော်ရန်အတွက်လုပ်ငန်းသုံးဖောက်သည်တစ် ဦး ကိုယခုကျွန်ုပ်တို့ကူညီနေပါသည်။ သူတို့ကနေရာတော်တော်များများ၊ Multi-ဘာသာစကား စီးပွားရေးလုပ်ငန်းနှင့်မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်းရှာဖွေရေးနှင့်ပတ်သက်။ အချို့သောရလဒ်မကောင်းတဲ့ပါပြီ။ သူတို့ site အသစ်ကိုစီစဉ်နေတုန်းပြissuesနာအချို့ကိုကျွန်တော်ဖော်ထုတ်ခဲ့တယ်။
Archives - သူတို့ရှိသည် ပြီးခဲ့သည့်ဆယ်စုနှစ်အတွင်းအများအပြားဆိုဒ်များ သူတို့ရဲ့ကွန်ရက်စာမျက်နှာရဲ့ URL ဖွဲ့စည်းပုံမှာထင်ရှားတဲ့ခြားနားချက်တခုရှိတယ်။ ကျနော်တို့စာမျက်နှာဟောင်းလင့်များကိုစမ်းသပ်တဲ့အခါ, သူတို့ကသူတို့ရဲ့နောက်ဆုံးပေါ် site ပေါ်တွင် 404'd ခဲ့ကြသည်။
မဟာဗျူဟာအသစ်၏အရေးပါသောအစိတ်အပိုင်းမှာအထက်ပါပြ3နာ (၃) ခုအားအသုံးချရန်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့ပျောက်ဆုံးနေသောစာမျက်နှာများအားလုံးသို့ပြန်လည်လွှဲပြောင်းမှုများထည့်သွင်းရန်သေချာစေရန်လိုအပ်သည် (အမှားအယွင်း ၄၀၄) ။ ဘာသာပြန်ထားသောစာမျက်နှာများကိုထည့်ခြင်းဖြင့်၎င်းတို့၏ဘာသာစကားမျိုးစုံရှာဖွေသောသုံးစွဲသူများကိုအမြတ်ထုတ်နိုင်သည်။ ဒီဆောင်းပါးမှာတော့ငါအာရုံစိုက်မယ် 404 အမှားပြissueနာ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်အဆင့်ကိုထိခိုက်နေလို့ပဲ။
ဖောက်သည်များနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်ရှင်းလင်းချက်များကိုလွယ်ကူစေရန်ကျွန်ုပ်သည်သူတို့အားရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များကိုအမြဲတမ်းအသိပေးခဲ့သည် အညွှန်းကိန်း စာမျက်နှာတစ်ခုနှင့်ထိုစာမျက်နှာရှိအကြောင်းအရာများအားသော့ချက်စာလုံးများနှင့်ကိုက်ညီအောင်လုပ်ပါ။ သို့သော်၊ အဆင့် ၎င်း၏လူကြိုက်များမှုအပေါ်အခြေခံပြီးစာမျက်နှာတစ်ခု - ပုံမှန်အားဖြင့်အခြားဆိုဒ်များပေါ်တွင် backlinks သို့ဘာသာပြန်ထားသော။
Ouch ။ ၎င်းသည်အသုံးပြုသူ၏အတွေ့အကြုံနှင့်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်အသုံးပြုသူများအတွက်ဆိုးသည်။ ရလဒ်အနေနှင့် search engine သည် backlink ကိုလျစ်လျူရှုပြီးနောက်ဆုံးတွင်သင့် site ၏အခွင့်အာဏာနှင့်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ကိုကျဆင်းသွားစေသည်။
သတင်းကောင်းတစ်ခုမှာတရားဝင်ခွင့်ပြုထားသော site တစ်ခုပေါ်ရှိ backlink များသည်သက်တမ်းကုန်ဆုံးသွားခြင်းမဟုတ်ပါ။ ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူများအတွက်ဆိုဒ်အသစ်များတည်ဆောက်ပြီးအကြောင်းအရာဟောင်းများသို့လင့်ခ်အဟောင်းများကိုစနစ်တကျပြန်ပို့လိုက်တာနဲ့ဒီစာမျက်နှာများကိုရှာဖွေရေးအင်ဂျင်၏ရလဒ်စာမျက်နှာများထိပ်ဆုံးသို့ပြန်ရောက်သွားသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရသည်။SERP).
သင်၏အော်ဂဲနစ်ရှာဖွေမှုလမ်းကြောင်း (နှင့် ၀ က်ဘ်ဆိုက်ဒီဇိုင်းအေဂျင်စီတစ်ခုစီသည်ဖြစ်သင့်သည်) ကိုအဓိကထားသောအေဂျင်စီတစ်ခုသင့်တွင်ရှိပါကသို့မဟုတ်ဤလုပ်ငန်းကိုမလုပ်ခဲ့သော SEO အတိုင်ပင်ခံရှိပါက၎င်းတို့သည်သူတို့၏လက်မှုပညာအတွက်အမှန်တကယ်ပေါ့ပေါ့ဆဆရှိသည်ဟုကျွန်ုပ်ယုံကြည်သည်။ ၀ ယ်ယူရန်ရည်ရွယ်ချက်နှင့်သက်ဆိုင်သောအလားအလာအတွက်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်သည်အဓိကလမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
မှတ်ချက်။ အကယ်၍ သင်သည် site အသစ်တစ်ခုသို့မပြောင်းရွှေ့လျှင်၊ စာမျက်နှာ ၄၀၄ ကိုရိုးရှင်းစွာစောင့်ကြည့်ပြီးလမ်းကြောင်းပြောင်းရန်ဤလုပ်ငန်းစဉ်ရှိအဆင့် ၅ သို့တိုက်ရိုက်သွားနိုင်သည်။
နောက်တစ်ဆင့်မှာ၎င်းတို့အမှန်တကယ်ပါဝင်သောအကြောင်းအရာများကိုစစ်ဆေးရန်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်မည်သို့လွယ်ကူအောင်တည်ဆောက်ရမည်ကိုခွဲခြားသတ်မှတ်ရန်ဖြစ်သည် အကြောင်းအရာစာကြည့်တိုက် site အသစ်မှာစနစ်တကျဖွဲ့စည်းထားတယ်။ ကျွန်ုပ်စာရေးဆရာများနှင့်ဒီဇိုင်နာများအလုပ်မလုပ်နိုင်အောင်အချိန်တိုအတွင်းမှာပင် WordPress ဥပမာအားဖြင့်စာမျက်နှာများကိုအလွတ်များတည်ဆောက်သည်။
စာမျက်နှာမူကြမ်းအားပြန်လည်ဖြည့်တင်းရန်လက်ရှိ URLs များနှင့်ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုပြန်လည်ကြည့်ရှုနိုင်သည်။ သို့မှသာကျွန်ုပ်သည်လိုအပ်သောအကြောင်းအရာများအားလုံးသေချာစေရန်နှင့်ဆိုဒ်ဟောင်းရှိဆိုက်အသစ်မှဘာမျှမပျောက်ပါ။
ကျွန်ုပ်တို့သည် URL တည်ဆောက်ပုံကိုရိုးရှင်းအောင် လုပ်၍ စာမျက်နှာနှင့်စာစောင်များကိုတိုတိုနှင့်ရိုးရှင်းအောင်ကြိုးစားပါကရိုးရှင်းပါသည်။ နှစ်များတစ်လျှောက်ငါ redirects သည်အချို့သောအခွင့်အာဏာများဆုံးရှုံးသွားသည်နှင့်အမျှ၎င်းတို့ကိုပိုမိုကောင်းမွန်အောင်လုပ်ခြင်းသည်ပိုမိုထိတွေ့ဆက်ဆံမှုကိုဖြစ်စေသည်။ ငါမကြောက်တော့ဘူး အဆင့်မြင့်စာမျက်နှာကို redirect အဓိပ္ပာယ်ရှိသည့်အခါ URL အသစ်တစ်ခုသို့။ ဒါကို spreadsheet နဲ့လုပ်ပါ။
အဆင့် ၃ ရှိ spreadsheet ကိုအသုံးပြုပြီး၊ (ဒိုမိန်းမပါသော) ရှိပြီးသား URL နှင့်ဒိုမိန်းအသစ်ဖြင့်ရိုးရိုးရှင်းရှင်းဇယားတစ်ခုကိုဖန်တီးသည်။ ငါဒီ redirects တင်သွင်း Math SEO Plugin ကိုအဆင့်သတ်မှတ်ပါ site အသစ်မစခင်။ အဆင့်သင်္ချာသည်၎င်းဖြစ်သည် အကောင်းဆုံး WordPress plugin ကို SEO အတွက်, ကျနော့်အမြင်အတွက်။ ဘေးထွက်မှတ်စု…ဒီဖြစ်စဉ်ကိုသင်လုပ်နိုင်တယ် (လုပ်သင့်တယ်) တောင်မှသင်လုပ်နိုင်တယ် ဆိုဒ်အသစ်တစ်ခုသို့ဆိုက်ပြောင်းရွှေ့ခြင်း.
သင်သည်အဆင့်အားလုံးကိုယခုအထိလုပ်ပြီးပါက၊ သင်၌ဆိုက်အသစ်၊ redirects အားလုံး၊ content အားလုံးနှင့်သင်စတင်ရန်အဆင်သင့်ရှိသည်။ သင်၏အလုပ်မှာမပြီးဆုံးသေးပါ။ ကွဲပြားခြားနားသောကိရိယာနှစ်ခုကိုအသုံးပြုထားသောစာမျက်နှာ ၄၀၄ ခုကိုခွဲခြားသတ်မှတ်ရန်သင်သည် site အသစ်ကိုစောင့်ကြည့်ရမည်။
Google Search ကို Console - ဆိုဒ်အသစ်အသစ်ကိုစတင်သည်နှင့်တပြိုင်နက်သင်သည် XML sitemap ကိုတင်ပို့ပြီးထို site အသစ်နှင့်ပြissuesနာများရှိမရှိကိုတစ်ရက်တည်းတွင်ပြန်လည်စစ်ဆေးပါ။
အဆင့်သတ်မှတ်ချက်သင်္ချာ SEO Plugin's 404 Monitor - ဒါကသင်မကြာခဏအသုံးပြုသင့်တဲ့ကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ သင်ဆိုဒ်တစ်ခုစတင်သောအခါ၌သာမဟုတ်ပါ။ ၎င်းကို Rank Math Dashboard တွင်ဖွင့်ရန်လိုအပ်သည်။
ဥပမာတစ်ခုအနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည် multi-location အတွက် site တစ်ခုကိုစတင်ခဲ့သည် သွားဆရာ ၀ န်သည် Medicaid လွှမ်းခြုံမှုရှိသောကလေးများအတွက်အထူးပြုသည်။ ကျွန်တော်တို့ဖော်ထုတ်ခဲ့တဲ့စာမျက်နှာတွေထဲကတစ်ခုကတော့ဆောင်းပါးမပါ ၀ င်ဘူး။ ကလေးသွား 101။ လက်ရှိဆိုဒ်တွင်ဆောင်းပါးမရှိပါ။ Wayback စက်မှကောက်နှုတ်ချက်တစ်ခုသာရှိသည်။ ဆိုဒ်အသစ်ကိုစတင်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့မှာပြည့်စုံတဲ့ဆောင်းပါးတစ်ခု၊ အချက်အလက်အပြည့်အဝနဲ့လူမှုရေးဂရပ်ဖစ်တွေရှိတယ်၊ URL အဟောင်းကနေအသစ်သို့လမ်းကြောင်းပြောင်းပေးတယ်။
ဆိုက်ကိုဖွင့်လိုက်သည်နှင့်တပြိုင်နက်ထို URLs ဟောင်းမှစာမျက်နှာအသစ်သို့အသွားအလာလမ်းကြောင်းပြောင်းနေသည်ကိုတွေ့ရသည်။ ဒီစာမျက်နှာကကောင်းတဲ့အသွားအလာအချို့ကိုအဆင့်ဆင့်စတင်ဖော်ပြပေးသည်။ ငါတို့မလုပ်ခဲ့ဘူး။
ကျနော်တို့ 404 Monitor ကိုစစ်ဆေးတဲ့အခါစာမျက်နှာ ၄၀၄ မှာရောက်နေတဲ့“ baby သွားများ” ပါတဲ့ URLs များစွာကိုတွေ့ခဲ့တယ်။ စာမျက်နှာအသစ်သို့လမ်းကြောင်းလမ်းကြောင်းအတိအကျကိုကျွန်ုပ်တို့ထည့်သွင်းခဲ့သည်။ ဘေးထွက်မှတ်စု ... ကျွန်တော်တစ် ဦး အသုံးချနိုင်ဘူး ပုံမှန်စကားရပ် URLs များအားလုံးကိုဖမ်းယူနိုင်ဖို့ကြိုးစားပေမယ့်ကျွန်တော်တို့စတင်ဖို့သတိထားပါ။
ယခုစာမျက်နှာသည်စတင်ပြီးတစ်ပတ်အတွင်း၎င်းတို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်အသစ်၏နံပါတ် ၈ အများဆုံးလူကုန်ကူးခံရမှုစာမျက်နှာဖြစ်သည်။ မည်သူမဆိုရောက်ရှိသည့်အခါတိုင်းနှစ်ပေါင်းများစွာ ၄၀၄ စာမျက်နှာရှိသည်။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့ဝက်ဘ်ပေါ်ရှိတည်ရှိနေသောအချိုရည်ဟောင်းများကိုစနစ်တကျပြန်ညွှန်းခြင်းနှင့်စောင့်ကြည့်ခြင်းတို့ကိုသတိမပြုမိလျှင်၎င်းသည်ရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်းမရှိသောကြီးမားသည့်အခွင့်အလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
Rank Math မှာ ၄၀၄ အမှားပြင်ဆင်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအလွန်အသေးစိတ်ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ရှိတယ်။
Tags: 404404 အမှားအယွင်းများငှေစာရငျးစစျဆေးတွား site ကိုgoogle search consoleတင်သွင်း redirectsမြေပုံ urlsအော်ဂဲနစ်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်သင်္ချာ plugin ကိုအဆင့်သတ်မှတ်သင်္ချာ seo အဆင့်သင်္ချာ seo plugin ကိုရာထူးအဆင့်ပြန်ညွှန်းအော်သံရှာဖွေရေးအဆင့်သတ်မှတ်ချက်semrushseoseo အဆင့်serpsite suckerနေခြည်WordPress